Manchester City ayaa iska wadata guulaheeda kadib markii ay maanta ku quusisay Tottenham 3-0… – Hagaag.com
Manchester City ayaa iska wadata guulaheeda kadib markii ay maanta ku quusisay Tottenham 3-0…
Manchester City ayaa iska wadata guulaheeda 15 kulan, waxayna fadhidaa kaalinta koowaad iyadoo leh 53 dhibcood hal ciyaarna weli gacanta ku heysata.
Waxay u aheyd Mourinho iyo kooxdiisa habeen madow, kadib markii looga badiyey 3-0 ciyaar masiiri aheyd oo la wada sugayey oo bidhaamin karto halka uu u jiheystay tartanka horyaalka Ingriiska.
Goolasha ayaa kala dhaliyey 2 gool oo saxiixay Gundogan iyo Rodri oo dhaliyey gool rigoore ahaa, waxaa si dirqi ah gool uga fakaday, Raheem sterling oo noqon lahaa kii afraad.
Dhinaca kale Kooxda Napoli ayaa soo cariirsatay kaalinta afaraad ee kala horeynta horyaalka Talyaaniga, iyadoo uga mahadcelisay guushii 1-0 ee ay ka gaareen Juventus maanta oo Sabti ah, wareegga 22-aad ee tartanka.
Garoonka Diego Armando Maradona ee Napoli ayaa Lorenzo Insigne dhaliyay goolka guusha ee Napoli isagoo dhaliyay rigoore daqiiqadii 31aad, taasoo uu xisaabiyay kaaliyaha garsooraha fiidiyowga (Var) oo sheegay in qalad uu galay daafaca Juventus Giorgio Chiellini.
Napoli ayaa ku guuleysatay inay ilaashato hogaankeeda ilaa dhamaadka ciyaarta ka dib markii ay si adag u xakameysay furayaasha ciyaarta iyo hubka weerarka leh ee Juventus, gaar ahaan Cristiano Ronaldo, gooldhaliyaha ugu sareeya horyaalka isagoo leh 16 gool.
Guushan ayaa sare u qaadday isku dheelitirka kooxda Napoli oo ay ka dhigtay 40 dhibcood, si ay ugu soo booddo booska afraad, iyadoo laba dhibcood ka dambaysa Juventus, oo kaalinta saddexaad fadhida, oo ku rajo weyneyd inay guuleysato si ay ugu soo dhowaato kooxaha Milan oo leh 49 dhibcood iyo Inter ay leh 47 dhibcood oo weliba labadooda min hal ciyaar u hartay,